Margarekha » सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित : कुन बुँदामा डा. केसीको आपत्ति ?
सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित : कुन बुँदामा डा. केसीको आपत्ति ?
–डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति र समस्या सामधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने माग राखेका छन्। तर, पारित भएको विधेयकमा आयोगसँगै छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय पनि खोल्न सकिने प्रवधन राखिएको छ।